musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Edin Dzeko Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane March 6, 2019
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; "Diamond yeBosnia". Our Edin Dzeko Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvekukwanisa kwake kushamisa asi vashomanana vanofunga nezveBio Dzeko's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Edin Dzeko Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Edin Dzeko akaberekwa musi we 17th weChitatu 1986 muSarajevo, Bosnia neHerzegovina. Akazvarwa kuna amai vake, Belma Džeko uye baba, Midhat Džeko.
Nhoroondo yehuduku yeEdin Džeko inyanzvi yekushinga uye simba. Icho chiitiko chemukomana uyo akapinda kubva kumabhokwe ehuputi kuti aite pamusoro pebhokisi yenyika. Dai iyo yakanga isati iri amai vaBelma, avo vakamisa mwana wavo wechidiki kubva kuenda kunotamba nebhola mumunda wakakonzera bhomba maminetsi mashomanana gare gare, tingadai tisina kumboona Edin Džeko kutora munda kana kupupurira Chelsea FC . Chiitiko ichi chakaitika mumazuva ehondo yeBalkan.
Iyo inodzokera kumashure ku1992, Hondo yeBosnia yeUndendende yakatambanudza kubva pamakore matatu kusvikira 1995. Yaiva imwe yenzira dzinotyisa zvikuru munhau yeBalkan seBosnia Serbs neCroats dzakarwa pamusoro pemarudzi. Sarajevo, guta guru reBosnia neHerzegovina uye musha weEdin Džeko yaiva imwe yenzvimbo dzakaipisisa zvakaparadzwa kubva muhondo. Akarwisana nehupenyu semucheche uye akaita kuti ave mumazita akakurumbira mumutambo webhola.
Edin Dzeko Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pana 31 March 2014 Džeko akaroora musikana wake Amra Silajdžić uyo ari muBosnia muenzaniso uye mutambi wemifananidzo. Ari mukuru wemakore maviri kupfuura murume wake.
Amra akamboroorwa nemumwe mudiki webhizimisi weSerbia, Vladimir Vičijentijević, aneye ane mwanasikana ane makore gumi nemana, Sofia. Vose vaviri vakaziva kuti kurambana kwakanaka kwakanga kuri nani kupfuura imba yakaipa uye munhu wose akafamba.
Rudo rudo Amre Silajdžić naEdina Džeke vakatanga muna 2012 paakanga ari kuManchester City. Vanenge gore vaifungidzira paukama hwavo, ivo vakanyarara, uye hukama hwavo hwakaziviswa nekugovana zvifananidzo pa Twitter.
Muna February 2016, akava baba vemusikana anonzi Una. Mwana wake wechipiri, mukomana anonzi Dani, akaberekwa munaSeptember 2017.
Edin Dzeko Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Edin Dzeko akati mhuri yake yaibatsira nguva dzose mubasa rake, kunyanya baba vake, avo vakamutora kuenda kuchikoro chekudzidzisa paakanga ari ku Željezničar.
Baba vake vakatambawo basa muBosnia neHerzegovina. Džeko Snr inonzi inonzi starstar muSarajevo.
HANZVADZI SIKANA: Merima Džeko ndiye hanzvadzi yakafanana yeEdin Dzeko. Haasi chete mukoma wake chete asiwo hutano hwake hwemwana hwakanakisisa sezvo vose vari vaviri vakapedza nguva yakawanda pamwe chete vachikura.
Pasi pane kuratidzwa kwechokwadi chokuti Edin naMerima vave vakanyanya kunaka.
Mufananidzo wacho pamusoro apa wakatorwa muBosnia.
Edin Dzeko Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -unhu
Takawana Edin Dzeko ane unhu hunotevera kumunhu hwake.
Edin Dzeko's Strengths: Iye Anonzwira tsitsi, unyanzvi, unyanzvi, munyoro, akachenjera uye mumhanzi.
Unoshayiwa Edin Dzeko: Edin anogona kunge ari Kutya, kuvimba zvakanyanya, dzimwe nguva anosuruvara kunze kwezvikonzero zviduku uye ane chido chokunzvenga chokwadi.
Icho Edin Dzeko anoda: Kuva wega, kurara, mimhanzi, rudo, maonero ezvinyorwa uye zvinyorwa zvemweya
Icho Edin Dzeko asingadi: Ziva-izvo-zvose, vachizvidzwa, nguva yakapfuura yekudzoka kumunyengedza uye utsinye hwemhando chero ipi zvayo sezvaakaona muhondo dzeBosnia.
Chaizvoizvo, Edin Dzeko ane ushamwari zvikuru uye kazhinji anozviwana ari mune imwe kambani yevanhu vakasiyana chaizvo. Iyewo haazvibatsiri, nguva dzose anoda kubatsira vamwe, asingatarisiri kuita chimwe chinhu. Mafungiro ake emanzwiro anokwana zvese zvakakwana.
Edin Dzeko Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kutamba Shorts
Edin Dzeko akambova necheki risina kuburitsa shortsana yemutambo mukupikisa mukushamisika kunoshamisa kumutambo wenyika yake neGrisi yakaitika mugore re2016. Bhonia-Herzegovina mutungamiriri akazoguma achiona rutsvuku paakazoendeswa mberi.
Chiitiko ichi chakaitika mumagumo ekupedzisira e10 ekukodzera kweNdebe yeNyika apo boka reDzeko raitungamirira 1-0. Yakatanga apo munhu wekutanga weManchester City, iye zvino kuRoma, akadzika pasi pechipingamupinyi kubva kuna Sokratis Papastathopoulos kunze kwevanopikisa nzvimbo yechirango. Zvikwata zvechiGiriki zvakabviswa pasi apo akaedza kurwisana nebhora kunze kwekubata Dzeko, zvichikonzera kugadzirisa kunobatanidza vazhinji vatambi vemativi ose maviri uyewo maqembu maviri 'technic staff.
Dzeko, uyo akanga atova kadhi rakatsvuka, akatumirwa nemutungamiriri, Jonas Eriksson, apo Kyriakos Papadopoulos akapiwa mutsvuku wakananga kuti akwanise kuputira mumashure shure kwechiitiko chekutanga. Greece yakaramba ichiwana muenzanisi munguva yekukuvadza nemapoka ose akadzikiswa kusvika ku10 varume.
"Ini ndine kadhi tsvuku pasina chikonzero, ini handiikozvino sei," Dzeko akati pashure. "Mutongi anoti ini ndakatanga chinhu chose, asi ini ndoga ndaipedzisa pasi, saka ndingadai ndakatanga sei?
Akawedzera kuti: "Ndinonzwa sokuti ndarasikirwa ne3-0. Greece haina kukodzera iyi pfungwa. Havana kukodzera kunyange 1-0 kurasikirwa, vakakodzera kurasikirwa ne4-0. "
Edin Dzeko Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -The Luggage Story
Izvi zvakagadzira zvakawanda zvevhidhiyo kuti vadzidze mapurisa ekutsvakurudza mapurogiramu nemahofisi ekutsvakurudza ruzivo rwekudenga kuti vazive kana Edin Dzeko achiita seari kuenda kuLondon. Zvichida, kuenda kwake, kuva kune imwe nzvimbo munzvimbo yeSurrey, nzvimbo yatingaziva seCobham, apo mishonga uye mabhiiyo anowanzoitika kuBlobal Football Club. Yaiva mutambo weItaly Mediaset Premium iyo yakatanga kubudisa chikamu ichi. Mushumo wavo unowedzera kuti Dzeko aifambidzana nehanzvadzi yake, pamwe chete nomushandi wake Silvano Martina.
Edin Dzeko Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Career in Summary
Džeko akatanga basa rake pa Željezničar, vachitamba semudziri pakati pe2003 ne2005, asi nekubudirira zvishoma kutamba munzvimbo iyoyo. Aive akaonekwa semakore akareba kwazvo, uye ane urombo husina mano. Mudzidzisi weDžeko panguva iyoyo, Jiří Plíšek, akaona zvaakakwanisa uye apo Plíšek akadzokera kumba, akarayira imwe kambani, Teplice kutenga murombo mukomana.
Željezničar akagamuchira purogiramu ye € € 25,000 yeDžeko, mumwe wevatungamiri veZeljezničar vanoti makore akazotevera, "[Takafunga kuti takakunda lottery". Akanga ane chikwereti chechikwereti na Ústí nad Labem mu2005, panguva iyo akawana zvinangwa zvitanhatu mumitambo ye15. Gare gare gore iroro, akadzokera kuTeplice, achigara ikoko kusvikira 2007. Ne 13 vavariro mumitambo ye30, ndiye aiva wechipiri-chinangwa cheCzech League munguva ye 2006-07. Nemhaka yezvaakaita, mutungamiri weVfL Wolfsburg Felix Magath akamupindira kwe € 4 mamiriyoni. Akakanda zvikwereti zvezvikwata pachikwata. Izvi zvakaita kuti zita rake rive panzvimbo yekutanga yekutsvaga mabheji.
Mushure mekufungidzira kwakanyanya, Roberto Mancini, mutungamiri weManchester City, akatsigira pa 3 January 2011 kuti mari ye £ 27 mamiriyoni (€ 32 mamiriyoni) akanga abvumirana naWolfsburg kuDžeko, iyo yaiva yeChipiri yepamusoro-soro yekutengesa, pashure Robinho's £ 32.5 mamiriyoni (€ 42.5 mamiriyoni) kubva ku Real Madrid mu2008. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nekuverenga Edin Dzeko Childhood Story pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Marc-Andre ter Stegen Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts